China Yemagetsi tepi, kupisa kutsigira tepi, PVC tepi, kuputira tepi fekitori uye vagadziri | Boda
Tepi yemagetsi, kana PVC yemagetsi kuputira inonamira tepi, inozivikanwawo seyemagetsi kuputira inonamira tepi kana kuputira tepi. Inogona kupfupikiswa se: PVC yemagetsi tepi, PVC tepi zvichingodaro. Magetsi tepi ine kuputira kwakanaka, murazvo unopikisa, voltage kuramba, kutonhora kuramba uye mamwe maitiro. Kazhinji inokodzera waya ichitenderera, kuputira uye kugadzirisa kwemhando dzakasiyana dzemota uye zvemagetsi zvikamu senge transformer, mota, capacitor, voltage regulator, nezvimwe. Tepi yemagetsi ine tsvuku, yero, bhuruu, chena, girini, nhema, nhema uye nezvimwe mavara. Chii chinonzi tepi yemagetsi uye ndeapi mashandisiro ayo?
Kugadzirwa kwemaitiro emagetsi tepi:
Inonyanya kuve yakatarwa nePV firimu uye yakazoputirwa nerabha kumanikidza inonamira.
Chinangwa chemagetsi tepi:
Kazhinji inokodzera kuputira zvikamu zvakasiyana zvekurwisa. Semuenzaniso, iyo waya yekubatana ichitenderera, yekugadzirisa yekugadzirisa gadziriso, shanduri, mota, capacitor, voltage regulator uye mamwe marudzi emota, zvemagetsi zvikamu zveiyo yekudzivirira yekudzivirira basa. Panguva imwecheteyo, inogona zvakare kushandiswa kusunga, kugadzirisa, kurova, kurapa, kuisa chisimbiso uye kuchengetedza mumaindasitiri maitiro.
Magetsi tepi maficha:
Tepi yemagetsi inoreva tepi inoshandiswa nevemagetsi kudzivirira kubuda kwemagetsi nekuisa mukati. Iyo ine yakanaka yekuisa mashandiro, murazvo unodzora, yakakwira voltage kuramba, yakanyanya tembiricha kuramba, yakasimba shrinkage elasticity, nyore kubvarura, nyore kupeta, yakakwira murazvo kudzora, yakanaka mamiriro ekunze kuramba uye zvichingodaro. Uye zvakare, kuiswa kwetepi yemagetsi zvakare kwakanyanya. Inogona kushandiswa kuputira waya uye tambo majoini pazasi pe 70 ° C, kuzivikanwa kwemavara, sheath dziviriro, wiring harness inosunga, nezvimwewo, uye inogona zvakare kushandiswa kusunga, kugadzirisa, kurova, kurapa, kugadzirisa, kuvhara uye kuchengetedza mumaindasitiri maitiro.
Use uye chengetedzo yemagetsi tepi:
Kana tichishandisa tepi yemagetsi, tinofanirwa kuiputira nehafu inopindirana. Izvi ndezvekugadzira yunifomu yekutenderera uye yakatsetseka, uye makakatanwa akakwana anofanirwa kuiswa. Zvakare, pamhando yekubatana yemhando yekubatana, iyo tepi yemagetsi inofanirwa kuputirwa kunopera waya, uye ndokupetwa kumashure kuti usiye pira yerabha, kuitira kudzivirira chiseling kuburikidza. Paunenge uchimonera yekupedzisira tambo yemagetsi tepi, haifanire kutambanudzwa kudzivirira kudhonza mureza. Kuti irambe ichiita mushe, tepi yemagetsi inofanirwa kuchengetwa mukamuri tembiricha uye mamiriro emhepo.
BOSENDA tepi yemagetsi, yakagadzirwa neyekutanga-kirasi zvinhu, ine yakanaka kunamatira uye huremu vimbiso. Izvo zvakasiyana nematepi emagetsi emusika, ayo viscosity haina kukwana, uye mhinduro mushure mekushandisa kazhinji haina kunaka. Tepi yedu yakaedzwa zvakadzama, kutanga kubva pakusarudzwa kwezvinhu zvakasvibirira, kugadzirwa kwechero link, zvakanyatso kudzorwa. Ita shuwa kuti mutengi anogutsikana mushure mekugamuchira. Vatengi vanobva kuMiddle Est, Eastern Europe, South America nenyika dzeEU.
Pashure: Angle grinder, kukanganisa kukanda, sando, li-ion chibooreso, maturusi emagetsi
Zvadaro: Welding muchina, DC Welding muchina, AC Welding muchina, Welded mask, Welding accessories
Magetsi PVC Tepi